Isikhokelo seMpilo yaBantwana-iBhanki yokutya yaseGalveston County
admin Ngamana 20, 2019 0 Comment Imfundo yezondlo
Ukuba uziva ucelomngeni ngokucinga ngokutya okusempilweni komntwana wakho, awuwedwa. Eli linqaku loxinzelelo kubazali abaninzi kodwa masilithathe eli nyathelo ngenyathelo! Ungaqala ngenyathelo elinye kwicala elifanelekileyo kwaye ukuba kuko konke okusebenzayo kusapho lwakho emva koko awungophumeleli! Ukwakha indlela yokuphila esempilweni kuya kuthatha ixesha kwaye uqhelane nomntwana. Nazi iziseko ezimbalwa zokuba ukutya okunempilo kwabantwana kujongeka kanjani.
Iziqhamo kunye nemifuno- Eli lelona qela lokutya linzima ukwazisa abantwana ukuba abaqhelanga kutya iziqhamo kunye nemifuno rhoqo. Indlela elungileyo yokwenza malunga nokwazisa ezi zinto iya kuba kukusika i-veggie enye kunye nesiqhamo esinye abaziqondayo kwaye baziphake nezinye izinto zokutya abonwabileyo nabazaziyo. Njengoko banambitha isiqhamo esitsha okanye imifuno kwaye bathathe isigqibo sokuba bayabathanda okanye cha, ungabakhonza rhoqo kwaye uqalise ukuzisa ezinye iziqhamo kunye nemifuno ngendlela othanda ngayo. Kuhlala kulungile ukusebenzisa iziqhamo ezisemathinini okanye ezifriziwe kunye nemifuno ngokunjalo! Jonga nje iswekile okanye umxholo wesodium kwileyibhile.
Iiprotheni Iiproteni zibaluleke kakhulu kwimpilo yomntwana okhulayo. Kubalulekile ekukhuleni kwezihlunu, ukuzigcina ziziva zigcwele ixesha elide, kunye nokubonelela ngamanqanaba aphezulu amandla obomi obonwabileyo, nobusebenzayo. Ukuba umntwana wakho akayithandi inyama zama ezinye iindlela zeprotein: iimbotyi, i-nut butters, amantongomane, i-chickpeas (hummus), kunye namaqanda.
Zobisi- Izinto zobisi ziqinisiwe ngeVitamin D, zibonelela ngeprotein, egcwele i-calcium, kwaye uninzi lwabantwana luyabathanda! Ezi zezinye zezinto ezilula ukugcina ujonga ukutya komntwana. Isitshixo apha kukuqinisekisa ukuba awuphelelanga ekukhonzeni izinto zobisi ngenxa yomxholo wamafutha kwaye xa kufikwa kwizinto ezinjengeyogathi, qiniseka ukujonga umxholo weswekile.
Iinkozo- Uninzi lweenkozo ngoku ziqiniswe nge-iron kunye ne-folic acid, eziyimfuneko ekukhuleni okufanelekileyo. Iinkozo zikwanazo nezixa ezisempilweni zefayibha kunye neevithamini B.
Elona candelo linzima malunga nokwenza ukutya okunempilo kuwe mntwana kukunciphisa ukutya okucutshungulwayo kunye nokutya okulula. Ndiyazi ukuba kulula kakhulu ukuyithetha kunokwenza. Abantwana bayatsaleleka kwezi zinto enkosi ngokulula kokusetyenziswa kunye nentengiso enemibala kunye nemithombo yeendaba. Nciphisa izinto zokutya kwiintsuku ezimbini ngosuku, enye emva kwesidlo sakusasa kunye nenye emva kwesidlo sasemini. Oku kuyakuqinisekisa ukuba umntwana wakho ulambile ngexesha lesidlo kwaye unegumbi elininzi lokugcwalisa isisu sakhe ngezakha-mzimba eziya kubanceda bahlale besempilweni kwaye bonwabile.
Ukutya okukhawulezayo kufanele kuncitshiswe ekutyeni komntwana. Iyagcwalisa kodwa inika izondlo ezimbalwa kwaye abantwana banokungondleki ukuba batya ukutya okukhawulezayo kuphela.
Iziselo ezineswekile kufuneka kwakhona ibe yinto encinci ekutyeni komntwana. Iziphuzo zeziqhamo azizange zithathe indawo yezona ziqhamo kodwa zilunge ngakumbi kunesoda. Amanzi nobisi zezona zilungileyo kwiintsana nakwiintsana. Amanzi mihla le ayimfuneko ekukhuleni nasekuncedeni ngokuchasene nokuphelelwa ngamanzi emzimbeni. Ukuhambisa amanzi ngokufanelekileyo kunceda ekucoleni ukutya, okunokuchaphazela amanqanaba amandla.
Xa kuziwa ekunciphiseni ukutya okunempilo kubantwana eminye imigaqo embalwa yesithupha yile; Soloko uqala usuku lwabo ngesidlo sakusasa esimnandi, zama ukubakhuthaza ukuba bahlale kude kwiscreen ngexesha lesidlo, kwaye bazame ukuphonononga ukutya okutsha kunye neendlela zokupheka kunye. Oku kuya kunceda abantwana bagcine indlela yokuphila esempilweni ixesha elide, eliya kuthi likhuthaze iingqondo ezicacileyo kunye neemood ezingcono.
I-buzz ejikeleze impilo yabantwana ayihlazisi abazali xa becinga ukuba benza umsebenzi ongonelanga ngexesha abalinikiweyo, kukukhumbula ukuba sonke sizama ukuthintela izifo ezixhaphakileyo kwaye sigcina abantwana bakho bonwabile kwaye beqaqambile . Konke oku kuqala ngotshintsho oluthile lokuqonda kwindlela yesiqhelo. Singathanda ukuva imibuzo yakho ngesi sihloko ukuba unayo!
—- UJade Mitchell, Utitshala weSondlo
egqithileyo ngeposi Previous: Ukutya okusempilweni ekuhambeni
Okulandelayo elilandelayo: Imigaqo yeMpilo yaBantu abaDala